Madaxweyne Farmaajo oo Lagu Casuumay Shirweynaha Xisbiga Madaxweyne Erdogan ee AK – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo Lagu Casuumay Shirweynaha Xisbiga Madaxweyne Erdogan ee AK
Agoosto 18, 2018 4:54 g 0
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo Safar maalin ah ku tegay wadanka Jabuuti ayaa gaaray Dalka Turkiga, markii uu casuumaad rasmi ah ka helay dhiggiisa, Recep Tayyip Erdoğan.
Agaasimaha Xafiiska Warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya C/nuur Maxamed Axmed ayaa Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA u sheegay in Madaxweynaha JFS iyo Madaxweyne Ordogan ay ka wada hadli doonaan adkaynta xiriirka Walaaltinimo ee Labada Dal, iskaashi ku aaddan xoojinta dhaqaalaha,ammaanka,is-dhaafsiga ganacsiga iyo maalgashiga.
“Madaxweynaha ayaa inta uu Turkiga jooga wuxuu halkaas kaga qayb geli doonaa kullanka Lixaad ee ay yeelanayaan golaha wakiillada ee Xisbiga haatan talada Dalka haya ee AK Part, shirkaas oo dhici doono Berri oo ay Taariikhdu tahay 18-ka Augost” sidaa waxaa yiri Agaasimaha Warfaafinta
Dowladda Turkiga ayaa xiriir wanaagsan la leh Dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo. iyadoo Turkigu uu magaalada Muqdisho uu ka hirgaliyay saldhig milteriga ugu weyn ee uu ku leeyahay Qaarada AFrika, halkaasi oo lagu tababaro ciidamada federaalka Soomaaliye. Waxaa kaloo shirkada gaar loo leeyahay oo Turki ahi ay maamulaan Dekeda iyo Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Duqa Muqdisho oo Goryahooda dib ugu celiyaay Qoys danyar